Tokony hametraka fomba fijery tsy mitanila ny Fitondrana foibe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
RABARISON Arsène Andriatiana, Mpampianatra sy mpikaroka eo amin’ny sehatry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony no mitondra ny nitafana ary mizara ny fijeriny momba ny fitsinjaram-pahefana.
Fa inona ny fitsinjaram-pahefana raha atao amin’ny teny fohy ?
Tsy azo lazaina ho zava-baovao eo amin’ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena ny fitsinjaram-pahefana, izay mifototra amin’ny fahaiza-mitantana ireo rafi-pitondrana misandrahaka isan-tokony avy.
Raha ny famaritana ankapobeny ny fitsinjaram-pahefana dia ny fitantanana ny raharaham-pitondrana manomboka any ifotony izay manome lanja manokana ny fokonolona ka miafara amin’ny fandrindran’ny Fitondrana foibe. Ny andrasana amin’ny fitsinjaram-pahefana dia ny fampandrosoana eo amin’ny seha-pihariana isan-karazany sy ny fanomezana vahana ny fampiroboroboana ny toekarena izay miainga avy any ifotony mihitsy ary ny demokrasia izay manome lanja ka mampandray anjara ny vahoaka rehetra.
Raha atao teny fohy, inona zava-misy eny amin’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ?
• Tsy ampy ary indraindray tsy misy fahaiza-manao mifanaraka amin’ny fampivoarana takin’ilay vondrom-paritra
• Kely ary zara raha misy ny fidiram-bola miditra amin’ny kitapom-bolan’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana indrindra fa ny Kaominina amin’ny ankapobeny
• Tsy hita taratra loatra ny mangarahara eo amin’ny fitantanana indrindra fa ny vola sy ny fitaovana
• Tsy manana vina na tetikasa maharitra azo ianteherana ary matetika aza dia tetikasa miserana izay vao mainka manimba ny ezaka efa natao no hita, hany ka raha vao zara raha misy fampandrosoana entiny
• Tsy maharaka ny asa ampiandraiketina aminy ireo sampandraharaha apetraky ny Fitondrana foibe eny anivon’ny vondrom-paritra
• Tsy mitondra amin’ny tena fampandrosoana ny fiaraha-miasa itsinjaram-pahefanam-paritra (coopération décentralisée) ary indraindray aza dia ny olom-boafidy no mitavana azy ireny
Inona ny olana tena sedrain’ny fitsinjaram-pahefana ?
Voalohany dia ny rafi-pitondrana izay miovaova foana ka miteraka tsy fahamatorana na eo amin’ny mpitondra any amin’ny fototra na ireo eo anivon’ny Governemanta sy ny mpanatanteraka ary dia matetika lasa andrankandrana ny fitantanana ny vondrom-paritra.
Ny sora-bola atokana ho an’ny fitsinjaram-pahefana indrindra fa ny Kaominina sy ny Faritra dia zara raha misy ahafahana manatanteraka ny fampandehanan-draharaha sy ny tena hevitra hitondrana fampandrosoana.
Mitanila tanteraka ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana satria misy Kaominina na Faritra izay anokanan’ny Fitondrana foibe vola na fitaovana na koa fahaiza-manao mihoatra lavitra noho ny sasany.
Ary farany, ny tsy mbola voafehin’ny mpitondra isan’ambaratongany tsara ny tena fitsinjaram-pahefana, satria lasa fitaovana politika sy kabary tsara lahatra fotsiny izany ary matetika aza dia mibirioka amin’ny fomba fijery hafa mihitsy.
Misy vahaolana azo eritreretina ve hametrahana izay tena fitsinjaram-pahefana?
Betsaka ny vahaolana sy soso-kevitra efa natolotry ny sokajin’olona na mpitondra samy hafa, fa ireto manaraka ireto kosa no tena fototra :
Voalohany aloha dia averina jerena tsara miaraka amin’ireo teknisiana sy manam-pahaizana ny fizaram-paritra misy mba hifanaraka amin’ny tantara napetraky ny teo aloha, ny toetra jeografika, ny fizaran’ny toetrandro, ny endri-pifandraisana eo anivon’ny samy vondrom-paritra, sy ny sisa.
Tokony handray an-tanànana ny fampandrosoana ny vondrom-paritra sy ny lafin-tany misy azy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny manomboka amin’ny olom-boafidy izany fa tsy hionona amin’ny famatsiam-bola sy fanampian’ny Fitondrana foibe.
Tokony hametraka fomba fijery tsy mitanila ny Fitondrana foibe amin’ireo asa sy fampitaovana ny vondrom-paritra ary hanome koa ny herizikin’ny isam-paritra amin’ny tena fampandrosoana mifanaraka amin’ny filan’ilay Faritra na lafin-tany mihitsy. Ny Fitondrana foibe amin’izay dia mpanelanelana sy manamora izay fiaraha-miombon’antoka heverin’ny Faritra fa hampahomby ny ezaka fampandrosoana ataony.
Apetraka eo anivon’ny andrim-panjakana mpanao lalàna ny handinika ka hamaritra tsara ny toe-bola tena ilain’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana mba hifanaraka amin’ny filan’ny vondrom-paritra tsirairay satria ny famatsiam-bola sy ny fampitaovana ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana no fototra sy fanoitra lehibe (clé de voûte ) hampandrosoana azy ireo ary tokony hatao vaindoham-piniavan’ny mpitondra izany.
Tokony hatsaraina ny vovonan’ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana (intercommunalité) mba hampirindra ny tetika sy hevitra hitondrana ny tena fampivoarana satria moramora kokoa ny mampivondrona ny fomba fijery ao anatin’ny faritra na lafin-tany ka mitovitovy ny toe-tany sy ny ny zava-bita.
Ny fahaizan’ny mpitondra sy tompon’andraikitra eo amin’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana mifehy ny fampidiran-ketra eo aminy dia fomba iray mitarika ho amin’ny fananan’ilay vondrom-paritra fahavitan-tena eo amin’ny fitantanana sy ny fampandehanana ny rafitra misy.
Hamehezana ny resaka?
Mbola betsaka ny ezaka atao raha te hametraka ny fitsinjaram-pahefana mifototra amin’ny fampandrosoana sy ny demokrasia isika, izany ezaka izany dia mitaky finiavana avy amin’ny rehetra na olon’ny Fitondrana, na olom-boafidy, na mpandraharaha, na ihany koa mpamatsy vola ary indrindra ny vahoaka izay hiantefan’izany.